Masy Goulamaly: Hanoy ny fanatsarana ny sosialin’ny mponina aty Tsihombe
lundi, 18 mars 2019 19:54
Mitohy ny asa ho an-dramatoa Masy Goulamaly Marie Jeanne d'Arc, ary efa nahitam-bokatra izany. Tamin’iny taom-piasan’ny solombavambahoaka farany iny no nanaovany fangatahana mba hananan’i Tsihombe lycée fianarana asa, nanampiana ireo tanora izay tsy afaka manohy ny fianarany any amin'ny Oniversite.
Hitohy izany fanampiana ny tanora izany, hoy i Masy Goulamaly amin'izao firotsahany hofidiana depiote izao indray, ka hiitatra manerana ny Disitrika izany, ary hifantoka bebe kokoa amin’ny sehatry ny fambolena, fiompiana ary ny jono amin’ny alalan’ny fikambanana.
Hanampy betsaka ireo Reny mananontena koa aho, hoy izy, amin’ny alalan'ny fananganana fikambanana manokana ho famoronana asa, ary hanohy ny fitakiana ny fanomezana fanampian'ny fanjakana manokana ireo zokiolona, ka ho tanterahina amin’ny alalan'ny fanomezana "Karatra Maitso".
Nisy KERE namaivay taty amin'ny faritra Atsimo ny taona 2014-2015. Nanao antso avo tamin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka vahiny Rtoa Masy Goulamaly, ary nisy vokatra tsara izany, ka nahatonga ny fivoriambe izay natao tao Ambovombe, Androy, mba hijerena ny vahaolana vonjy maika sy ny lavitrezaka mba hanamaivana ny fahasahiranan'ny Mponina, ary anisan'izany ny teto Tsihombe.